laacibfm.com » RASMI: Real Madrid Oo Xaqiijisay Inay Iska Iibiyeen Daafaceedii Halista Ahaa Achraf Hakimi
RASMI: Real Madrid Oo Xaqiijisay Inay Iska Iibiyeen Daafaceedii Halista Ahaa Achraf Hakimi
Kooxda Real Madrid ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in daafaceedii halista ahaa Achraf Hakimi inuu ku biiray kooxda Inter Milan ka dib heshiis ay gaareen labada kooxood ee La Liga iyo Serie A ka kala dhisan.
Heshiiska ay Inter Milan kula wareegtay Achraf Hakimi ayaa ah mid ay marka hore bixineyso 40 milyan euro iyo shan milyan euro kale oo ku xirnaan doonta qaab ciyaareedkiisa,.
Daafaca midig oo wacdarro u dhigayay Borussia Dortmund xilli ciyaareedkan ayaa ugu danbeyn dhameystiray heshiiskii uu ugu wareegayay kooxda Nerazzurri.
Achraf Hakimi ayaa amaah ku joogay labadii xilli ciyaareed ee ugu danbeysay kooxda Jarmalka ee Borussia Dortmund, laakiin waxa uu iska diiday inuu heshiis joogta ah ku sii joogo garoonka Siganl Iduna Park isagoo doortay kooxda Talyaaniga ee Inter.
Achraf ayaa doonayay inuu ku laabto Real Madrid laakiin waxa uu ogsoon yahay inuusan boos joogta ah ka heleynin madaama booska daafaca midig ee Real Madrid uu xureystay Dani Carvajal, halka ay sidoo kale joogaan Alvaro Odriozola iyo Nacho Fernandez oo booskaas ka ciyaara.
Warbixin ay Real Madrid soo saartay ayaa lagu yiri: “Kooxda waxa ay dooneysaa inay u mahadceliso Achraf mudadii sannadaha aheyd ee uu muujiyay xirfadlenimo iyo dabeecad wanaagsan oo ku dayasho mudan tan iyo markii uu akadeemigeena yimid sannadkii 2006, waxaana u rajeyneynaa nasiib wacan”
Hakimi oo 21 sanno jir ah ayaa durbaba 22 kulan u saftay xulka dalkiisa Morocco oo ay ku jirto seddex kulan uu ciyaaray wareegii group-yada ee Koobkii Adduunka ee 2018.